musha Oceania Beauden Barret Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Beauden Barrett Biography inopa chokwadi nezve yake yehucheche nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Robyn Barrett naKevin Barrett), Mhuri, Wife (Hannah Laity), nezvimwe.
Pamusoro pezvo, vanin'ina vake vazhinji (vamwe vacho vanosanganisira Jordie Barrett, Kane Barrett naScott Barrett), Hupenyu Hwega, Muhoro, mambure, uye Mararamiro.
Chinangwa chedu panguva ino ndechekukupa pfupiso yeNew Zealand rugby union player mune yakapusa mazwi. Yake nyaya yehucheche inotanga kubva paakazvarwa munyika ino kusvika ave nemukurumbira.
Kugutsa kuda kuziva kwako, tarisa mifananidzo yezvinoitika zvakakomberedza hupenyu hwake kubva pakutanga kwake kwakaderera. Pazasi payo pikicha inopa yakajeka nguva muBeauden Barrett's Biography.
Beauden Barrett's Biography - Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nhau.
Isu tese tinomuziva semunhu anozvarwa New Zealand nhabvu uyo ​​akahwina Rugby Player yeGore kanopfuura kamwe. Ndiye mumwe wevatambi vanomhanya kwazvo muAll Blacks neBlues.
Kumhanya kwaBeauden Barrett kwakamutendera kuti aite zvekuyedza-kupokana kune vanopikisa kuburikidza nebasa rake repasirese uye anova muyedzo wepamusoro-soro wevose vatanga-vashanu munhoroondo ye rugby. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanoziva Beauden Barrett's biography.
Kusiyana nezvaakaita, tinonzwisisa kuti vanhu vazhinji havasati vabata Beauden Barrett Biography.
Naizvozvo, isu tafunga zvakanaka kuti Ernest akupe iwe inonakidza ngano yaBeauden Barrett uye kuparara kwezviitiko zvake zverugby. Saka nediki ado, ngatitangei.
Beauden Barrett Yemwana Nhau:
Tisati tatanga, ngatitaurei nezve zviitiko zvekuzvara kwake. Beauden Barret akauya munyika ino musi wa27 Chivabvu 1991 muNew Plymouth, New Zealand, kuna amai vake, Robyn Barret, nababa vake, Kevin Barrett, mukuwedzera, mutambi werugby.
Beauden Barrett anozvarwa ari wechipiri mwanakomana pakati pehama dzake ina (Kane, aimbova mumiriri weBlues uye kaputeni weTaranaki uye varipo vese maBlack, Scott, Blake, naJordie) nehanzvadzi nhatu (Zara, Jenna naElla) yevabereki vavo, vane mufananidzo uri pazasi:
Tarisa vabereki vaBeauden Barrett - amai vake, Robyn Barret nababa vake, Kevin Barrett.
Mutambi werugby akaberekerwa kuNew Zealand akakurira papurazi remukaka muPungarehu, taundi diki muSouth Taranaki padyo neOpunake, maminetsi makumi matatu kutyaira kumaodzanyemba kweNew Plymouth kuNorth Island nevanin'ina vake vanomwe.
Zvisinei, paakanga ari 8, akagara gore rimwe muIreland. Simba rababa vake semutambi werugby paBeauden Barrett nevanin'ina vake raishamisa. Beauden Barrett akaziviswa kumutambo weRugby pakutanga nababa vake, Kevin Barrett.
Kukurira papurazi pamhenderekedzo yeNorth Island yeNew Zealand kwakawedzera kuda kwake mitambo.
Iine patsangadzi yekumashure yenzvimbo yechinangwa uye yakawanda yevanin'ina nevanin'ina vakatenderedza kuti vakwikwidze uye vatambe vachipesana, maeka euswa hwakasvibira aiita kuti ifare.
Nekudaro, semwana mudiki, akatambira makirabhu eRahotu neCoastal Rugby. Aive nechido chakasimba chemutambo uye akachengeta kuzvipira kwake kubva paudiki hwake.
Kudzosera kumashure apo baba pavai ridzira Hurricanes- museve uchinongedzera Beauden Barret.
Beauden Barrett Nhoroondo Yemhuri:
Sezvambotaurwa, baba vaBeauden Barrett, Kevin Barrett, vakanakidzwa uye vakatamba Rugby nyanzvi.
Somugumisiro, aigona kutarisira mitezo yeimba yake pasinei zvapo nenhamba huru. Papurazi remukaka rakabatsirawo zvakanyanya.
Imba yacho yaingova neyakaringana yekutenderera maererano nekupa zvinodiwa senge chikafu, mbatya, uye pekugara.
Beauden Barrett Mhuri Kubva:
Ngatitarisei kumadzitateguru ake; mutambi werugby akazvarwa uye akaberekerwa muNew Plymouth, Taranaki, pamwe chete nevanun'una vake vanomwe. Taranaki inzvimbo ine makomo uye pamhenderekedzo yegungwa kumadokero kweNew Zealand's North Island.
Nekudaro, Beauden Barrett ane nhaka yeIrish. Sekuru nasekuru vake vaive nevabereki veIrish, kunyangwe vakaberekerwa muNew Zealand.
Pane imwe nguva, baba vaBeauden Barrett, Kevin Barrett, vaifanira kutama nomudzimai wavo, Robyn, nevana vavo vachienda kuIreland kunotsvaka basa.
chinzvimbo semaneja wepurazi.
Parizvino, tinogona kutaura kuti Beauden Barrett muNew Zealander (kazhinji, anozivikanwa seKiwis) asi wedzinza reIrish. ChiMāori mutauro unotaurwa pakati pevanhu veko.
Mepu inoratidza mhuri yaBeauden Barrett.
Beauden Barrett Ekutanga Basa:
Semunhu wemitambo, Beauden Barrett nemukoma wake mukuru Kane vakatevedzera. Ivo vaviri vakatamba mutambo uyu kuchikoro chesekondari uye zvishoma nezvishoma kukoreji.
Beauden Barrett akamiririra Francis Douglas Memorial College muNew Plymouth, pamwe chete neAll Black timu yaaishanda naye Liam Coltman, kwaakakunda muXV yayo yekutanga.
Pamakore gumi nemapfumbamwe, akasarudzwa muNew Zealand Sevens timu yemakumbo maviri ekupedzisira e19 IRB Sevens World Series muEngland neScotland. Iye zvakare akaita nhanho yeTaranaki mumutambo weITM wakatarisana neNorthland.
Basa rake mutema rinosanganisira chinguva neAll Blacks Sevens achiri kuyaruka muna 2010, uye pamwe chete ne2011 New Zealand Under 20 divi.
Beauden Barrett Dzidzo:
Zvizhinji zvedzidzo yeRugby Star yakaitika muNew Zealand kunze kwenguva iyo mhuri yakatamira kuIreland.
Saka padzidzo yake yepuraimari, Barret akaenda kuSt Fiach's National
Chikoro muBallinacree, Chikoro chepuraimari muOldcastle, County Meath, Ireland, uko iye nemunin'ina wake Kane vakadzidza kutamba nhabvu yeGaelic.
Munguva yehudiki hwake, Beauden Barrett akaenda kuFrancis Douglas Memorial College, yese-vakomana nyika yakabatanidza chikoro cheKaturike nenzvimbo dzekubhodha muWestown, New Plymouth.
Mufananidzo wekutanga waFrancis Douglas Memorial College uine vadzidzi vashoma - kusimbisa kune imwe yehama dzeBarret (Jordie).
Beauden akapinda nesimba muRugby achiri kuchikoro. Yakanga iri panguva ino hunyanzvi hwake hwemitambo hwakasimbiswa. Zvishoma nezvishoma, akaenderera kuMassey University, Palmerston North, muNew Zealand.
Beauden Barrett Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Muna 2011, mutambi weRugby weNew Zealand akabatana neWellington Hurricanes ndokuva vatambi vekambani pamwe nemutungamiriri Conrad Smith pavakapinda muHurricanes. Akakurumidza kuzvimisikidza sevatambi vechamupupuri uye akaisa marekodhi mazhinji.
Paaive nemadutu, Beauden Barrett akatyora rekodhi rekodhi-remwaka, iro raimbove nemakumi mashanu nematanhatu poindi, nekurova makumi manomwe nemanomwe. Muna 152, akaita All Blacks Test bvunzo yake uye akatanga kushandiswa pakutanga semunhu anokanganisa mutambi kubva pabhenji.
Beauden achigadzira rake rekutanga kurwisa Ireland mu2012.
Kubva muna 2014 anga atanga yake yekutanga Test uye akaonekwa mumatanhatu eRugby World Cup 2015 machisi, achihwina mapoinzi makumi maviri nematanhatu, kusanganisira muyedzo unoshamisa muFinal.
Beauden Barrett Biography - Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Nesimba rinokuvadza, bhutsu-yakaita sebhaisi, uye akangwara mutambo manejimendi, Beauden Barrett anga ari muchimiro chemagetsi. Muna 2016, akabatsira kutungamira madutu kune yavo yekutanga Super Rugby zita 2016. Vakakunda nevakakunda 20-3 kukunda Shumba muWellington.
Madutu anorova yavo yekutanga Super Rugby zita muna 2016.
Chikwata chenyika chevarugby chemunyika yeNew Zealand, chinozivikanwa zvikuru seAll Blacks vanomirira New Zealand mumunhurume wevatambi venyika, uyo unoonekwa semutambo wenyika.
Barrett ndomumwe wevatambi vanokurumidza muAll Blacks neBlues (madutu). Iye nekuwedzera akabatsira kutungamira maAll Blacks mukuhwina back-to-back World Rugby Player yeMwaka Wegore Mubairo muna2016 na2017.
World Rugby Player yeGore Mubairo muna 2016 na2017.
Beauden akaridza mutambo wake wechi100 weSuper Rugby weHurricanes munaKurume 2018, vachipesana neCrusaders, ichivabatsira kukunda. Anowanzozonzi mambo weNew Zealand rugby.
Kufamba kwaakaita panhandare kwakamuisa pamazita eanotungamira rugby union test edza vanowana zvibodzwa, makumi matatu nemaviri pakuedza kwake kwese kuita kwenyika. Beauden naiyewo wepamusoro-soro kuyedza-scorer chero chero zvazvino maAll Blacks, naBen Smith.
About Hannah Laity - Iyo Nyaya yaBeauden Barrett Wife:
Mukwikwidzi wevatambi vese vechitema uye dutu remhepo vakasangana nemusikana wechidiki muna 2013 anonzi Hannah Laity, saka takadanana. Mushure memakore mashanu ekuva pamwechete, Beauden Barrett nemusikana wake, Hannah Laity, vakagadzirira kutanga chitsauko chitsva.
Beauden Barret nerudo rwehupenyu hwake.
Pakazosvika Mid-Ndira muna 2019, ivo vakapedzisira vafunga uye vakasunga mapfundo pane imwe imba yepamusoro yeRakino Island, vachiva Mr. na Mai Barret zviri pamutemo. Muchato wacho wainge uzere nekuyevedza; mhete yavo yaive platinum yakashongedzwa nemadhaimani.
Mhemberero iyi yaive kurota kwakazara kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Shamwari yaBeauden All Black shamwari uye shamwari yepedyo, TJ Perenara anotungamira Ka Mate haka panzvimbo yekugamuchira kuzokorokotedza vaviri ava. (yadzo All Black TJ Perenara nemukadzi mutsva Greer vakadzokorora mune haka pamuchato wavo).
Wese munhu aive muruzevha akabatwa nemufaro nekuita uye akaunza misodzi zvakare.
Zvishoma nezvishoma, vaviri vacho vaitarisira mwana. Rinenge gore gare gare, mu2020, vaviri vacho vakazvara mwanasikana akanaka anonzi Billie. Hannah Barret chartered accountant uye anofambidzana nevamwe.
Nezve Beauden Barrett Vana:
Runako nemukadzi wake, Hannah Laity, vane mwana mudiki panguva yekunyora uku. Mwanasikana wamambo uyu anonzi Billie Rose Barrett. Iye akazvarwa pazuva re23rd raGunyana 2020.
Billie Rose Barrett mumaoko erudo evabereki vake.
Isu tinofungidzira mwana anotevera haazotora chinguva. Moreso, tarisiro, mwanasikana wamambo mudiki anogona zvakare kunge ari ramangwana superstar mumhanyi.
Beauden Barrett Hupenyu Hwemhuri:
Dzimba dzevatambi veRugby dzinonyanya kuve vanhu vemitambo kubva kuna baba uye pasi kuvana. Nekudaro, mweya wekutamba wakanaka wakachengeta nhengo yega yega ichidisisa nezve mumwe.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Beauden aisakwanisa kuzviita parizvino pasina kuwanikwa kwavo, vari vaviri vari pamwe uye pamwe chete. Tichifunga izvi mupfungwa, ngatitorei kuputsika nekukurumidza kweumwe neumwe wavo.
Jordie, Scott naBeauden Barrett nevabereki vavo Kevin naRobyn Barrett.
Nezve Beauden Barrett Baba:
Sezvambotaurwa, baba vaBeauden Barrett ndiKevin "Smiley" Barrett. Ndiye ngano yeTaranaki rugby, uye akaridza mwaka miviri yeSuper Rugby achionekwa mumitambo 167 yeTaranaki uye gumi nemana yeHurricanes muna 14-1997 pasi pemurairidzi Frank Oliver.
Kunyangwe Kevin Barrett asingataure nezvazvo, vakomana veBarrett (vana vake, kunyanya Kane, Beauden, Scott, naJordie) vakave nekurerwa kwakakwana kuti vabudirire muRugby. Akanga ari teak-yakaoma kukiya uye yekumashure mutsara mumazuva ake ekutamba.
Akanga ari teak-yakaoma kukiya uye yekumashure mutsara mumazuva ake ekutamba.
Kevin Barrett akasangana ndokuroora naRobyn mumakore avo ekutanga makumi maviri, mushure meizvozvo vakafunga kutamira kunze kwenyika kuti azotamba Rugby vasati vaita vana. Pamwe chete, vaive nevana vasere.
Mushure mekurega basa kubva kuhunyanzvi Rugby kuma 90s ekupedzisira, vakamukwezva kuti ave murairidzi, achitaura nezvazvo akaita zvine mutsindo. Zvakadaro, achiri murimi wemukaka.
Zvakangodaro, Kevin Barrett achiri murimi wemukaka.
Nezve Beauden Barrett Amai:
Sezvinowanzo danwa nevadikanwa vake, runako runosimbisa simba raamai vake uye hanya panguva yake yekukura. Anonzi Robyn Barret. Kunze kwekushanda nemurume wake, Kevin Barrett, aivezve mutambi mumunda wemukaka.
Robyn aive mutambi wenetball akanakisa, mutambi wepasi rose, uye akatamba basketball kuchikwata cheNew Zealand chine makore ari pasi pe18. Pamwe chete nemurume wake, aive nevakomana vashanu nevasikana vatatu.
Mufananidzo waBeauden Barrett naamai vake, Robyn Barrett.
Nezve Beauden Barrett Vanun'una:
Katsi, inowanzo danwa nevateveri vake, sezvambotaurwa, ine vamwe vanun'una vanomwe. Vose vakomana vashanu nevasikana vatatu. Ngatitorei miniti kuti tiunze info pamusoro pavo zvakasiyana.
Nezve Beauden Barrett Hama - Kane Barrett:
Kane Sinclair Barrett mutambi wenhabvu muNew Zealand. Ndiye dangwe uye dangwe remhuri yaBarrett. Seaimbove kaputeni, akamiririra Taranaki mumutambo weITM.
Sinclair akaita debut yake Taranaki mu2010, uye matambiro ake akagutsa akamuona akaiswa pakati peBlues squad yegore ra2013 na2014 Super Rugby mwaka.
Kane naBeauden vaigara vachitamba nekuenda kuchikoro pamwe nekuti paingova negore pakati pavo. Zvaigara zvichinetsa kuna Beauden uye akaramba achimisikidza nhanho dzekuti hama dzake dzitevere.
Mufananidzo waKane Sinclair Barrett.
Nezve Beauden Barrett Hama - Scott Barrett:
Scott Kevin Barrett zvakare mutambi wenhabvu weNew Zealand uyo parizvino anotamba sechivharira maCrusader muSuper Rugby neTaranaki muMiter 10 Cup. Akave akasarudzwa saCaptain 'Kapteni wemwaka we2020 Super Rugby.
Akawana kutanga kwake kwepasi rose munaNovember 2016; yaive mwaka wakanakisa weSugby Rugby yeCrusaders. Scott anofarira tsika yehaka inoitwa nevanhu vemuNew Zealand vanhu vasati vatamba mutambo wega wega.
Kutamba kwevatema vese chiroto chakaitika kwaari. Pachivande, anofarira kuve ega, kusiyana nehama dzake. Mbiri yake yaona kukura kuri kuenderera mukubudirira.
Scott Barrett - Crusaders 'Kapteni wemwaka we2020 Super Rugby.
Nezve Beauden Barrett Hama - Blake Barrett:
Blake ndiye mwanakomana wechina wemhuri yaBarret, mushure maScott. Ndiye iye akabatsira Coastal - kirabhu baba vake yaive yakakosha mukupayona - muma semi fainari ePremiership muTaranaki Chikunguru 2021; a feat hama dzake hadzina kumbobvira dzakwanisa.
Mutsara wechidiki wekumashure uchine zvido zvehunyanzvi. Blake anotamba zvakare kuLocal Club. Anoratidzika kunge ari padyo naJordie, saka vanogara vachitamba pamwe chete.
Blake Barrett akaridza mutambo wake wechi100 kuCoastal Rugby kuRahotu Domain.
Nezve Beauden Barrett Hama - Jordie Barrett:
Jorodhani Matthew Barrett ndiye gotwe pahama dzemhuri. Kunge hama dzake, iye mutambi werugby union uyo parizvino anotamba sechibatsiro kudzoka kune dzimwe nyika kuNew Blacks neNew Hurricanes mumakwikwi eSuper Rugby.
Hype yakapoterera Jordie muNew Zealand iri kukura zvinogara zviripo – nemaHurricanes achivharira mamwe maKiwi franchise kuti aiswe. Jordie Barrett akasaina neCanterbury yavo 2016 Miter 10 Cup mushandirapamwe.
Mutambi werugby Union akaita debut yake achibva pabhenji achidzidza paLincoln University.
Beauden Barrett nemunun'una wake Jordie pamberi peTaranaki's Miter 10 Cup.
Zvimwe Pamusoro paBeauden Barrett Sista:
Barret ane vanun'una vatatu, sezvakambotaurwa. Vanosanganisira Jenna, Zara naElla. Sisi vacho vanodawo zvemitambo uye vanowanzopinda mumitambo. Zara naElla zvakare vatambi vemitambo.
Ipo Zara achifarira kutamba netball; Ella inyanzvi yekushambira uye mutambi. Nekudaro, zvinosuruvarisa, ivo vaviri vane pasi chirwere.
Nezve Beauden Barrett Sista - Zara:
Zara, kana 'Zars' sekudanwa kwaanodaidzwa, kunonakidza, hunhu hwakanaka, uye ane Down syndrome. Nekudaro, sevanhu vazhinji vane Down syndrome, anotarisana nematambudziko ane chekuita nekutaura kwake. Asi kuve chikamu chemhuri hombe zvakamubatsira kuvandudza.
Kufanana nevazhinji vateveri veAll Blacks, Zara anoda kutariswa mushure memutambo. Uye anowana kutariswa kwakanyanya - nekuti Beauden Barrett ihanzvadzi yake hombe uye ari pedyo naye mushure memitambo. Mune zvese izvi, sechikamu chemhuri yeSports-inoda Barret, Zara anofarira kutamba netball.
Nezve Beauden Barrett Sista - Ella:
Ella, munin'ina waBeauden Barrett, inyanzvi yekushambira uye mutambi. Beauden akambobatana nasisi vake Ella, uye nhabvu yekumusoro yekutamba nyika Morgan Bamford kukwidza mari yerudo mu2015.
Akabatanidzwawo mukumhanyisa chirongwa chakabatikana chealumni uye Fundraising zviitiko paLucy Cavendish College, University of Cambridge.
Beauden Barrett nehanzvadzi yake Ella at10, uye Highland vachitamba mukwikwidzi wepasi rese Morgan Bamford.
Nezve Beauden Barrett Sista - Jenna:
Hanzvadzi yaBeauty, Jenna, inyanzvi yekushambira, inoda kuita timu yeNew Zealand iri pasi pemakore gumi nemasere uye nyanzvi yekugona. Muna 18, akatumidzwa musoro musikana weSacred Heart Vasikana 'Koreji (SHGC) muNew Plymouth.
Iye anotamba netball, saamai vavo; ndipo panotangira hutungamiriri hwake hwakawanda kubva pane zvaakataura.
Nezve Beauden Barrett Hama:
Iyo Nhoroondo yeRugby nyeredzi ine yakawanda yakawedzera nhengo dzemhuri. Iye ana Babamunini nasekuru vakakura uye vakatamba naye pamwe nehama dzake vachiri kupurazi. Zvimwe zvacho zvinosanganisira:
Mufananidzo waBeauden nevamwe vehama dzake diki.
Nezve Beauden Barrett Hama - Firipi Barret:
Ivo ndibabamunini vaBeauden, pamwe nehama yababa vake. Zvakare mutambi, anotamba Rugby uye ave murairidzi weRugby kuNew Zealand. Philip achidzidzisawo, Pungarehu akabudirira kwazvo mumakwikwi eMcLeod Shield epuraimari kuchikoro muTaranaki.
NaBeauden naKane vaitungamira nzira, rugby bug rakanyatso kuiswa muvakomana veBarrett. Neesha, anove hama yaBeauden, akambotapa Taranaki muWomen's National Provincial Championship.
Beauden Barrett Hupenyu hweMunhu:
Anonyanya kuzivikanwa nekumhanya kwake nekukasira uye nekukurumidza paanenge achitamba, mutambi anozivikanwa wese-kumashure uye dutu ane hupenyu kunze kweRugby. Iye anoda mhuka uye anofarira kutamba gorofu uye cricket.
Beauden Barrett - Anoda gorofu.
Kubata hove kwagara kuri chiitiko chinonakidza - kubva paudiki. Zvimwe zvinokuvaraidza kushambira uye kuchovha bhasikoro. Beauden anoshanda pasocial media uye anoteedzera vateveri vake vari kusimukira kuburikidza neFacebook, Instagram neTwitter.
Kubata hove kwagara kuri chiitiko chinonakidza - kubva paudiki.
Beauden Barrett Mararamiro:
Kune mutambi ane mukurumbira ane mukurumbira uyu uri kusimukira, mibairo uye mari inoenderana nemabhenefiti, humbozha hunokwanisika.
Beauden Barrett, kufanana nevamwe vake vane mukurumbira, akawana mota, zvivakwa zvinokosha mamirioni emadhora uye zvishongedzo zvakaita seake anopfuura zviuru mazana matatu emadhora eTudor black bay 3,500 wristwatch yemitambo.
Mufananidzo une $ 3,500 Tudor nhema bay 58 yemitambo wristwatch.
Mishumo ine kuti All Black Beauden Barrett nemukadzi wake Hannah vakabhadhara $ 4.8 mamirioni kutenga imba yeRemuera yaive nevabereki vaHana, Alison naAnthony Laity.
Yese Nhema Beauden Barrett's Auckland imba $ 4.8m Remuera imba.
Mutambi weWorld Rugby kaviri, Beauden Barrett akabvisa runyerekupe rwekuda mari yakawanda kunze kwenyika gore radarika apo akasaina chibvumirano chemakore mana chaisanganisira kutambirwa kwepamusoro-soro kweSuper Rugby kubva kuHurricanes kuenda kuBlues.
Barrett akaita mambure akakosha kubva kubasa rake semutambi werugby. Mubhadharo wake, sekutaura kwakabva kuDaily Mail, unenge wave unosvika mazana manomwe ezviuru zvemapaundi pagore uye mambure akakosha emadhora mazana mashanu nemakumi mashanu (NZ $ 780,000,000m).
Mutambi ane mukurumbira ari pakati pevatambi ve rugby vanobhadharwa zvakanyanya pasi rose. Iye zvakare anogadzira yakaringana yakanaka mari kuburikidza nemabheji endorsements. Adidas ndiye wekutanga pane vese.
Adidas inoramba iri iyo yekutanga kuvimbisa brand.
Beauden Barrett Untold Chokwadi:
Kunze kwenyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino zvimwe zvisingawanzoitika nezve Beauden Barrett naiye
Chokwadi # 1: Chikwata Chinoshandura:
Zvichitevera mwaka wa2019 weSuper Rugby, Beaudy akasaina zvekare neNew Zealand Rugby kusvika muna 2023. Akazivisawo kuti aizochinja makirabhu eSuper Rugby, kubva kuHurricanes kuenda kuAuckland-based Blues.
Chokwadi # 2: Varimi vemukaka:
Kunyangwe nebudiriro huru mumitambo, VaBarrett vanochengeta purazi ravo remukaka. Vane mombe dzinosvika mazana maviri kumatunhu matatu.
Chokwadi # 3: Passion yeCricket:
Beauden akanakidzwa nekiriketi yake achiri kukura uye akaitamba kusvika gore rake rekutanga kuyunivhesiti. Asi, haina kukwanisa kutamba zvese zviri zviviri, saka yaifanira kusiya Cricket yeRugby.
Chirevo chekuti charity chinotanga kubva pamba chakanyanya pano. Vese maBlack 'Barrett hama vakaunza hanzvadzi yavo Zara, vachikwidziridza kuziva nezve Down's syndrome. Beauden Barrett nemadzikoma ake vakautora semukana wekusvika pakubatsira vamwe vana vakaremara zvakafanana.
Iyo Upsidesdowns charity inoshuma kuti inodhura mhuri avhareji ye $ 4000 pagore uye inosvika kumadhora zviuru gumi kubata vana vane down's syndrome. Saka hama dzaBarrett dziri kushanda neUpsideDown kutsvaga mari kuti vamwe vagowana kurapwa kunodiwa - uye kuvapa chipo chekutaura.
Hama dzaBarrett dziri kusimudza ruzivo uye mari yerubatsiro, UpsideDown.
Chokwadi # 4: Hupenyu:
Unyanzvi hweBeaudy, Drills, munzira inoenda kumusoro inoshuvira kuverenga kune vateveri vadiki nevakuru. Iri bhuku rinosanganisira nyaya yaBeauden Barrett kubva mukurerwa kwake kumaruwa New Zealand kusvika pakukwira kwake kuburikidza neRugby masosi neTaranaki neHurricanes.
Rikki Swannell anonyora bhuku uyo ​​anga ari mushamarari wemitambo kweanopfuura makore gumi nemashanu, uye anoshanda semutori wenhau anoshanda akazvimirira uye mutsinhiri.
Kurerwa kwake pamwe nevanun'una vanomwe mumaruwa eNew Zealand, zviitiko muIreland achiri mudiki kusvika mukurumbira wake.
Chokwadi # 5: Knee Kukuvara:
2015 raive gore rinotyisa kune mutambi we rugby ane hunyanzvi sezvo Beauden akakuvara zvakanyanya mumabvi. Nekudaro, wakarasikirwa nechikamu chiri nani chemwaka gore iro. Iye, saka, akapedza yakati yenguva iyo mwaka mukudzoka.
Chokwadi # 6: Kuda Soccer:
Barrett akapinda chaizvo munhabvu zvakare, achikudziridza rudo rweManchester United neIrishman Roy Keane, achifunga kuti aizove mutambi wenhabvu saiye uye anoita mamirioni.
Aishuvira kwazvo aida maviri eAdidas Predator bhutsu saDavid Beckham, uye kana ndangopeta maoko-pane vamwe, aizove mabhutsu angu esarudzo kwemakore anotevera.
Roy Keane, Kapteni weAkare Manchester United, kurudyi, aive mumwe wemagamba aBeauden Barrett paakanga achigara muIreland.
Beauden Barrett Biography Pfupiso:
Kuti uwane pfupiso yekukurumidza yehupenyu hwake nhoroondo, shandisa tafura iri pazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezveVese vatema nedutu reRugby mutambi.
Beauden Barrett Biography Dhata
Zita rizere: Beauden John Barrett
Zita rekudanwa: Beaudy kana Katsi
Zuva rekuzvarwa: 30 yaMay 1991 (ikozvino makore makumi matatu nemwedzi mumwe)
Nzvimbo yekuzvarirwa: Nyowani Plymouth, New Zealand
Basa: Mutambi weRugby Union
Chazvino Chikwata: Taranaki, Blues
Nzvimbo: Kutanga shanu-sere, Fullback
Dzidzo: Francis Douglas Memorial College uye Massey University
Baba: Kevin Barrett
Amai: Robyn Barrett
Wife / Wawakaroora: Hana Laity
Mwanasikana (s): Billie Rose Barrett
Vanun'una (Vakoma): Kane Barrett, Blake Barrett, Scott Barrett, Jordie Barrett
Vanun'una (Hanzvadzi): Jenna Barrett, Zara Barrett naElla Barrett
Hama: Philip Barrett (Sekuru)
Hobbies: Kubata hove, kuchovha bhora, nhabvu
kukwirira: 6 ft 2 inches (1.87m)
Muhoro: 780,000,000 mapaundi pagore
Net Worth: £ 520,000 (NZ $ 1m)
Kunobva Pfuma: Mutambi weRugby
Tine tarisiro yedu kuti wakanakidzwa naBeauden Barrett Biography uye Yehucheche Nyaya. Ichokwadi baba vake, Kevin Barrett, aive akakosha pakubudirira kwake uye kwevakoma vake.
Nekudaro, pasina kuedza kwega kubva kuna Beauden Barrett, senge kudzidziswa kwake ega uye kugara achivavarira kuve hunhu huri nani. Anogona kunge asina kuwana zvakawanda.
Ndinoyera nhasi Beauden Barrett pakati pevatambi gumi vakanakisa ve rugby pasi rose, vachitevera zvavanofarira Antoine Dupont naMaro Itoje.
Isu tinovimba wawana izvi zvekunyora-up uchibata uye uzere nezvidzidzo. Ita zvakanaka kuti ugare wakabatana kune hwakawanda biography chokwadi neiyo yepamusoro-notch kunyatso.